« Iray volan’ny teny malagasy »: nanakatona ny fankalazana ny “Fantaro” | NewsMada
« Iray volan’ny teny malagasy »: nanakatona ny fankalazana ny “Fantaro”
Niara-dalana ny fanamarihana ny iray volan’ny teny malagasy sy ny fetin’ny Fahaleovantena. Nahavelombolo ireo hetsika tontosa, izay hirariana ny hitohizany. Anisan’ireny ny fifaninanana “Fantaro”.
Tsy nandalo fotsiny ny fanamarihana ny “Iray volan’ny teny malagasy”. Na somary takontakona aza, nisy ireo hetsika isan-tsokajiny, nokarakarain’ny foibem-pitondrana misahana ny maha Izy ara-kolontsaina, ao amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina.
Naompana tamin’ny lohahevitra “Fitiavan-tanindrazana mameno ny fisainana ka ny tenindrazana no asandratra sy iainana” ny fankalazana, nifanandrify tamin’ny fanamarihanany fetin’ny Fahaleovantena ihany koa.
Nofaranana tamin’ilay fifaninanana “Fantaro” ny fankalazana, omaly. Fifaninanana natokana ho an’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera izy io, tao amin’ny Efitrano Dox, ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy.
Nozaraina tamina vondrona maromaro ireo mpandray anjara ka ny isam-bondrona no nifaninana. Karazana fifaninanana maro, toy ny fitadidiana, ny fahaiza-miaraka, ny soratononina, ny vakiteny, ny fahalalana ankapobeny, sns, ny notontosaina. Niompana tamin’ny fifehezana ny teny malagasy ho an’ireo tompon’andraikitra izany.
“Ilaina tokoa ny fifaninanana toy izao. Ankoatra ny maha fialamboly azy, nahatsapana koa fa misy ny ezaka tokony hatao eo amin’ny fampiasana ny teny malagasy. Tsy vitan’izay fa nahafantaran-javatra maro ka ampirisihana hatrany ny hitohizany. Misy ny soso-kevitra hanatsarana koa ny manaraka”, hoy ny nambaran’ny talen’ny kabinetra, Rasoanarivo Haja.
Tsiahivina fa sampandraharaha iray manana andraikitra lehibe amin’ny fampitiavana, ny fanandratana ary ny fampahafantarana ny teny malagasy sy ny manodidina azy ny foibem-pitondrana misahana ny maha izy ny kolontsaina.